PowerInbox: Yakazara Yakasarudzika, Yakagadzirwa, Multichannel Meseji Platform | Martech Zone
PowerInbox: Yakazara Yakasarudzika, Yakagadzirwa, Multichannel Meseji Platform
Muvhuro, Mbudzi 16, 2020 Muvhuro, Mbudzi 16, 2020 Jeff Kupietzky
Sevashambadziri, tinoziva kuti kuendesa vateereri chaivo nemeseji chaiyo pamusoro pekodhi chaiyo kwakakosha, asi zvakare kwakaomesesa. Nenzira dzakawanda uye mapuratifomu - kubva pasocial media kusvika kuchinyakare nhepfenyuro - zvakaoma kuti uzive kupi kwekudyara kwako. Uye, hongu, nguva inguva yekugumira - panogara paine zvimwe zvekuita (kana izvo zvaungave uchiita), pane pane nguva nevashandi kuzviita.
Vagadziri veDhijitari vari kunzwa kumanikidzwa uku zvimwe kupfuura chero imwe indasitiri, kubva kuchinyakare nhepfenyuro nhepfenyuro kumablog mabikirwo, mararamiro uye niche, anokosha ezvinyorwa zvinyorwa. Nekuvimba nenhepfenyuro pane isina kugadzikana pasi, uye zvinoita senge magazillion nzvimbo dzakasiyana-siyana dzinokwikwidza kutarisisa kwevatengi, kuchengetedza vateereri kubatikana haisi yekutanga-inyaya yekurarama.
Sekuziva kwevashambadzi, vaparidzi vanovimba neshambadziro kuti vachengetedze mwenje uye maseva achinyemwerera. Uye isu tinoziva zvakare kuti kuwana izvo kushambadzira pamberi pevane chinangwa vateereri zvakakosha pakutyaira mari. Asi sezvo makuki-echitatu-bato asisina kushanda, kutariswa kwevateereri rave dambudziko rakatokura.
Vatengi vanhasi vane tarisiro dzakakwirira zvakanyanya dzekushandurwa - kutaura zvazviri, vangangoita vatatu kubva mu3 vanoti havabatanidzi ine zvekushambadzira zvemukati kunze kwekunge zvakagadziriswa kune zvavanofarira. Ikoko kunetsekana kukuru kune vese vaparidzi nevashambadziri - kusangana nemhando yepamusoro kwakanyanya kuri kuomarara sezvo kunetsekana kwekuvanzika kwedata kunowirirana nematanho epamusoro ekuita kwako munhu. Zvinoita sekunge isu tese takabatwa muCatch 22!
Iyo PowerInbox chikuva inogadzirisa iyo zvakavanzika / zvemunhu zvinopesana kune vaparidzi, vachivabvumidza kutumira otomatiki, akasarudzika mameseji kune vanyoreri pamusoro peemail, webhu, uye kusundira notices-zvizere nzira dzekupinda-mukati. Iine PowerInbox, chero saizi muparidzi anogona kutumira izvo zvirimo zvemunhu chaiye pamusoro pekodzero nzira yekutyaira mhinduro.
Email-Yakavakirwa Mukati Zvekuita
Heano mashandiro ayo: Chekutanga, PowerInbox inoshandisa vanyoreri 'kero yeemail- kwete makuki - kuvaziva ivo munzira dzese. Nei email?
Iyo yekupinda-mukati, saka vashandisi vanosaina / kubvuma kugamuchira zvemukati, zvakasiyana makuki anoshanda kuseri kwezviitiko.
Inoenderera nekuti yakasungirirwa kumunhu chaiye, kwete mudziyo. Cookies akachengetwa pachigadzirwa, zvinoreva kuti vaparidzi havazive kuti ndomushandisi mumwe chete pavanobva pakushandisa iPhone kune yavo laptop. Neemail, PowerInbox inogona kuteedzera maitiro emushandisi pamadhizaini nemumatanho ese uye kunongedza zvirimo nenzira kwayo.
Izvo zvakanyatsojeka. Nekuti maemail kero haawanzo kugoverwa, iyo data yakasarudzika kune iye munhu, nepo makuki achiunganidza dhata pane wese mushandisi wechigadzirwa ichocho. Nekudaro, kana mhuri ikagovana piritsi kana laptop, semuenzaniso, iyo cookie data ndeye jumbled mess yaamai, baba, uye vana, izvo zvinoita kuti kunongedza kuve kusingaite. Neemail, iyo data inosungirwa yakanangana neako mushandisi
Kana PowerInbox ikangozivisa munhu anyoresa, injini yayo yeAI yobva yadzidza kuti zvido zvevashandisi zvinoenderana nezvinodiwa zvinozivikanwa nemaitiro ekuvaka chimiro chaicho chemushandisi. Zvichakadaro, mhinduro yacho zvakare inobvisa kuburikidza nezvinyorwa zvevashambadziri kuti zvienderane nezvakakodzera kune vashandisi zvichibva pane yavo inozivikanwa nhoroondo uye zviitiko mune chaiyo-nguva.
PowerInbox inozoerekana yaendesa izvo zvakamisikidzwa zvemukati kune vashandisi kuburikidza newebhu email kana kusundira ziviso zvichibva necheni ipi yakaratidza kudhiraivha yepamusoro kuita. Sezvo chikuva chinoshanda, chinogara chichigadzirisa zvemukati curation uye ichienderera ichigadzirisa iyo modhi yekuwedzera yakanyatsoita yemunhu.
Nekuti zvirimo zvine basa zvakanyanya uye zvinobatsira, vanyoreri vanogona kudzvanya kuburikidza, kutyaira kubatanidzwa uye mari yezvinyorwa zvevabudisi zvemari. Kunyangwe zvirinani, PowerInbox inopa yakavakirwa-mukati monetization sarudzo, zvichibvumira vaparidzi kuisa zvinongedzo zvemukati zvakananga mumaemail avo uye kusundira notices.
Ipuratifomu yekuisa-iyo-uye-kukanganwa-iri nyore inobvumira vaparidzi kuti vachengetedze vateereri vachiita pamwe neyakagumirwa zvemukati chero zviyero-chimwe chinhu chingatomboitika pasina PowerInbox's otomatiki chikuva. Uye, nekuti kuisirwa kushambadza kunoitika otomatiki, inochengetera vaparidzi nguva yakakura kwazvo mukumisikidza nekutengesa zvinyorwa. Iyo inosanganisirana neGoogle Ad Manager, ichibvumira vaparidzi kudhonza kushambadzira yakananga kubva kune iripo online hesheni pasina chaiko kuedza.
Nei Vatengesi Vanofanira Kuchengeta
Iyo PowerInbox chikuva inofanirwa kunge iri pavatengesi 'radar nekuda kwezvikonzero zviviri:
Zvinenge zvese zvigadzirwa ndeye muparidzi mazuva ano, achigovera zvinyorwa zvemablog, kusimudzira email uye kusundira notisi kune vanyoreri. Vatengesi vanogona zvakare kushandisa iyo PowerInbox chikuva chekugadzirisa multichannel zvemukati zvemunhu uye zvekugovera, uye kunyangwe kuita mari. Mhando dzinogona kupinza shambadziro yemumwe wavo mumaemail avo kana kudonhedza yavo yakatarwa zvigadzirwa kurudziro se "kushambadzira" mumaemail avo ekutengeserana, zvichiratidza mamwe magiravhosi akanaka kuti aende pamwe neaya mabhutsu matsva, semuenzaniso.
Kushambadzira nevashambadzi veadhijitari uchishandisa iyo PowerInbox chikuva mukana wakanaka wekuisa chiratidzo chako pamberi pevane tarisiro uye nevateereri. Kunyangwe denda risati rasvika, 2/3 yevanonyoresa vakati ivo vanodzvanya kushambadziro mune tsamba yeemail. Kwemwedzi mitanhatu yapfuura, PowerInbox yaona kuwedzera kwe38% muemail kuvhura, zvinoreva kuti kubatanidzwa kweemail kuri kukwirisa. Uye makumi manomwe muzana evashandisi vatonyoresa kuti vatumire zviziviso, saka pane mikana mikuru ipapo, futi.
Sevateereri vanotarisira zvakawanda kubva kuvashambadziri maererano nehunhu uye zvakajairika-zvakagadzirwa, mapuratifomu akaita sePowerInbox anopa iyo AI uye otomatiki iyo inogona kutibvumidza kuzadzisa iwo akakwira mwero pachiyero. Uye, nekupa vateereri vedu zvimwe zvezvavanoda, isu tinokwanisa kuvaka hukama hwakasimba, hwakabatikana hunotya kuvimbika nemari.
Tora PowerInbox Demo
Tags: tsambambozha personalizationmameseji chikuvamultichannel mamesejipowerinbox
Jeff anoshanda sa CEO wePowerInbox, inovandudza tekinoroji kambani inobatsira makambani kuita mari tsamba dzetsamba dzeemail kuburikidza nezvakasimba zvemukati. Asati ajoina PowerInbox, Jeff akashanda semutungamiri uye CEO kuOversee.net, achitarisira mashandiro epasirese uye achivaka nzvimbo yeOversee inemazita emadhorobha mune rimwe remakurukota epasirese, achisimbisa kambani semutungamiri muInternet real estate. Pasi pehutungamiriri hwake, kambani yakachinjika muchizvarwa chinotungamira, ichivaka huwandu hwakawanda hwekukura uye mabhizimusi epamusoro epamusoro. Izvi zvisati zvaitika, Kupietzky akashanda munzvimbo dzehutungamiriri neX1 Technologies, Digital Insight (Intuit), Siebel Systems (Oracle), uye Loudcloud / Opsware (Hewlett-Packard). Jeff akatanga basa rake seye chipangamazano kuMcKinsey & Co, achigadzira marongero ebhizinesi e software, inishuwarenzi uye vatengi vebhengi. Anogara achitaura paDigital Media misangano, akave akaiswawo paCNN, CNBC, uye mune dzakawanda nhau nemagazini ebhizinesi.
Contextual Targeting: Mhinduro kune Brand-Yakachengeteka Ad Mamiriro Ezvinhu?
Swing2App: Iyo Yekupedzisira Kwete-kodhi App Kuvandudza Platform